TheSSS: iyo inoshanda sisitimu yakagadzirirwa maSeva | Linux Vakapindwa muropa
TheSSS (Chidiki pane Server Suite) isisitimu yekushandisa kushandisa isingaremi server purazi yakavakirwa pane mhenyu CD / USB, ndokuti, Rarama. Iyo yakavakirwa paGNU / Linux, kunyanya yakavakirwa pane 4MLinux server. Yezve vhezheni IyoSSS 23.1 4MLinux 23.1 vhezheni inotorwa, ichigadzira iyo ISO chifananidzo chinobatanidza kuwanda kwemapakeji kuita masevhisi aunoda: DNS, FTP, HTP, HTTPS, MySQL, SFTP, SMTP, SHH, Telnet, nezvimwe. Iwe unogona zvakare kukwirisa yako proxy server (Polipo neTor) uye shandisa firewall chengetedzo masisitimu akavakirwa iptables uye Clam AntiVirus.
Zbigniew Knojacki, mumwe wevagadziri ndiye aiona nezve kuburitswa patsva kwekuparadzirwa uku. Isu takakwanisawo kuziva zvimwe zvakadzama nezve mapakeji uye iyo kernel iyo inosangana. Iyo yepakati yakanyatso Linux 4.9.61 LTS pasi pehood, saka iri kernel chaiyo yemazuva ano ine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvitsva uye madhiraivha eazvino Hardware. Mamwe mapakeji akakosha akagadziridzwa kune dzimwe shanduro, senge OpenSSL 1.0.2m yekushandisa iyo SSL protocol, Postfix 3.2.4 yemaseva etsamba, Stunnel 5.43, nezvimwe.
Iyo dhatabhesi server yakagadziridzwa zvakare naMariaDB mune yayo vhezheni 10.2.10, iyo Apache dura rewebhu 2.4.29, PHP mapakeji 7.0.25 uye 5.6.32, iri dzekupedzisira dziripo nekuda kwezvikonzero zvekuenderana. Ndokunge, zvese zvaunoda kuti uite iyo nyowani LAMP server (Linux - Apache - MySQL kana dzimwe nzira - PHP / Perl) izvo zvinonyanya kudiwa uye zvichidikanwa. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti kuisa kugovera iri nyore uye otomatiki maitiro, saka haizounze matambudziko akawandisa. Uye kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uch? Ichi chinenge shanduro yakapfuura yaiswa, unogona kugadzirisa nemurairo zk kugadzirisa.
Iyo yekuvandudza ichave zvakare automatica, saka kana chirongwa ichi chaitwa, haufanire kuita chero chimwe chinhu. Kune rimwe divi, uri Rarama, unogona kumhanya usina kuisa chero chinhu, zvese zvakagadzirira kuyedza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » TheSSS: iyo inoshanda sisitimu yakagadzirirwa maSeva